Fifandonana tany Indonezia Miisa ireo 6 no namoy ny ainy
Indostria nomerika maneran-tany Ho tataovan-ketra amin’izay
Nahita marimaritra iraisana ny amin’ny fomba hakana hetra amin’ireo orinasa goavana miasa momba ny nomerika ireo minisitry ny vola avy amin’ny firenena 7 manankarena indrindra eto ambonin’ny tany izay nivory tany Chantilly – Paris Frantsa omaly.
Miketrika ny Amerikanina Handefa olona eny amin’ny volana indray
50 taona aty aorian’ny tetikasa Apollo 11, izay sambondanitra voalohany tonga teny amin’ny volana dia mieritreritra ny hiakatra eny indray ny Amerikanina.
Filoham-pirenena Peroviana teo aloha Voasambotra tany Etazonia noho ny resaka kolikoly
Voasambotry ny mpitandro filaminana Amerikanina tao Etazonia ny talata lasa teo ny filoham-pirenena perovianina teo aloha, Alejandro Toledo,
Johnny Clegg Matin’ny homamiadana
Nodimandry teo amin’ny faha-66 taonany noho ny homamiadana nahazo azy ilay mpihira Afrikanina tatsimo fanta-daza Johnny Clegg. Ilay hira natolony manokana ho an’i Nelson Mandela mitondra ny lohateny hoe :
50 taona aty aorian’ny tetikasa Apollo 11, izay sambodanitra voalohany tonga teny amin’ny volana dia mieritreritra ny hiakatra eny indray ny Amerikanina.Artemis indray no anarana nampisalorana ity tetikasa goavana ity izay tohanan’ny filoha Donald Trump mafy moa,
Loka AITTA - Afrika Norombahin`ny TECNO
Lasan`ny finday TECNO SPARK 3, izay vokarain`ny orinasa TECNO ny loka Africa Information Technology & Telecoms Awards (AITTA) tamin`ity taona 2019 ity noho ny vidiny mirary kanefa manaraka ny teknolojia avo lenta hatrany.
Emmanuel Macron Misokatra amin` izao tontolo izao
Iray amin` ireo fototra iorenan` ny politikan` ny Filoha Emmanuel Macron ny fisokafana amin` izao tontolo izao. Ankehitriny dia midona amin` ireo izay manindrahindra ny fihemoran` ny maha izy ny olon
Nitrangana fifandonana tany Djakarta teo amin`ny mpanohitra sy mpomba ny fitondrana ary ny polisy taorian`ny fanambarana ofisialy ny vokatra milaza ny fandresena indray an`i Jokko Widodo, filoham-pirenena teo aloha. 20 mahery ireo voasambotra. Milaza hanao fikarohana manokana ny amin`ilay olona nolazaina fa voatifitry ny balan`ny polisy ny mpitandro filaminana. Miisa 6 ireo namoy ny ainy tamin`ny fifandonana. Nampiasa etona mandatsa-dranomaso mba hanaparitahana ireo mpitokona ny mpitandro fimaninana nandritra ny fifandonana.